Emulsifying စက်လုပ်ငန်း |
ဖုန်စုပ်စက် emulsifying mixer လျှောက်လွှာ
Emulsifying စက်တွင် ကော်၊ သုတ်ဆေးများ၊ အလှကုန်များ၊ အစားအသောက်၊ ဆေးဝါးများ၊ ပလပ်စတစ်အစေးများ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း၊ ပုံနှိပ်မင်၊ ကတ္တရာနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးချမှု ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်သည်။ဓာတုပစ္စည်းများ- ပလတ်စတစ်များ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ ကော်...
လေဟာနယ် emulsifying ရောနှောထိန်းသိမ်းမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖုန်စုပ်စက် emulsifying စက်ကိုဝယ်သောဖောက်သည်များစွာသည် emulsifying စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားမေးလိမ့်မည်။ဤနေရာတွင် စီးရီးငယ်များသည် ရိုးရှင်းပြီး အသုံးများသော emulsifying စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်းအချို့ကို အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။1. ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်၊ emuls...
emulsifying စက်၏လျှောက်လွှာနယ်ပယ်တွင်သင့်လျော်သော emulsifier ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
သင့်လျော်သော emulsifying စက်ကိုရွေးချယ်နည်း၊ ဂျာမနီမှတင်သွင်းသော emulsifying စက်၊ စက်မှု emulsifying စက်၊ ရှေ့ပြေး emulsifying စက် Emulsifying စက်သည် စက်မှုပစ္စည်းများရောစပ်စနစ်၊ အထူးသဖြင့် အစိုင်အခဲ-အရည်ရောစပ်ခြင်းနှင့် liq...
Homogenizing machine, Blender, emulsifying machine သုံးမျိုးကွဲပြားပါတယ်။
ပထမဦးစွာကွဲပြားခြားနားသောအခြေခံမူများ- 1၊ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းစက်သည် rotor နှင့် stator တိကျသောညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအားဖြင့်၊ rotor မြန်နှုန်းမြင့်ချောမွေ့စွာလည်ပတ်ခြင်း၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားစွာဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ခိုင်မာသောအဝန်းအဝိုင်းအလျားလိုက်အမြန်နှုန်း၊ ညီညွှတ်မှုရရှိရန် angular speed တို့ဖြစ်သည်။2. အလုပ်...
မြင့်မားသော shear emulsifier အဓိပ္ပါယ်
High shear emulsifying machine သည် အပြည့်အဝသန့်စင်ပြီး တစ်ပြေးညီဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အမည်ရင်းမြစ်သည် အဆီပြန်သောပစ္စည်း (ဆီအဆင့်) နှင့် ရေကိုအခြေခံသည့်ပစ္စည်း (water phase) တို့ကို ရောစပ်ကာ ယူနီဖောင်း emulsion စက်တစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။သန့်စင်ထားသော ယူနီဖောင်းနှင့် ...
Emulsifying ကိရိယာများ emulsion ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် အဓိကစက်ကိရိယာမှာ ဆီနှင့်ရေကို အညီအမျှရောစပ်ရန်အတွက် emulsifying စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် emulsifying စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင်၊ emulsifying စက်သုံးမျိုးရှိသည်။